Molo nguAdele - Izinto Zobugcisa
Umntu okhokelayo ukusuka 25 , Le ikhutshwe ngo-Okthobha 23, 2015. Isihloko sengoma kufanelekile, njengoko siphawula ukubuyela kuka-Adele emculweni emva kweminyaka emithathu.
I-epic ballad yabhalwa ngu-Adele noGreg Kurstin (Pink's 'Blow Me (One Last Kiss),' Sia's ' Umxhasi '), ovelise nengoma. Kubonakala ngathi iyaqhubeka nomxholo wealbham yangaphambili, amashumi amabini ananye , eyayiyirekhodi lokwahlukana, kodwa ngeli xesha yimvumi eyophule intliziyo yomntu:
Molo kwelinye icala
Ndimele ukuba ndibize amawaka aliwaka
Ukuxelela uxolo, ngayo yonke into endiyenzileyo
Kodwa xa ndikubiza ungaze ubonakale ngathi usekhaya
Phezulu uAdele ubonakala ezama ukudibana nomthandi wakhe wangaphambili. Nangona kunjalo, ngaphandle kwedumela lakhe lokwahlukana kweengoma, uAdele uxelele uRyan Seacrest ukuba akabhekiseli kuye nabani na ngokuthe ngqo. 'Ndinomdla wokwazi malunga nexesha lam elidlulileyo ngoku ndikhulile,' the 25 imvumi icacisile. 'Asisengabantwana kwaye izinto ezinjalo. Luhlobo lokubulisa kubo bonke abahlobo bam bakudala, lonke ubudlelwane endiye ndanabo, bonke ootitshala bam bakudala, incinci yam xa ndandineminyaka esi-7 okanye esi-8, kunye nentwana yokuzibulisa kubo bonke abalandeli bam kuba ndimke ixesha elide. '
Ividiyo yomculo yafotwa emaphandleni kufutshane naseMontreal kwaye yayalelwa ngumlingisi waseCanada kunye nomphathi uXavier Dolan ( Umama , Tom kwiFama ). Ikliphu ibonisa uAdele echola iziqwenga zobudlelwane obungaphumelelanga. Tristan 'Mack' zasendle (AKA Michael Lee ukusuka Ucingo kunye noDixon Wilson 90210 ) Udlala i-ex yakhe ngokukhawuleza.
Ukuthetha ne Ixesha le-LA , Xavier Dolan, uchaze le vidiyo njenge 'ingekho mthethweni kakhulu.' Wongeze wathi: 'Amagama athi' Molo, ndim 'emva koko ubona umntu ethatha umnxeba. Andilunganga ekucingeni iividiyo ezinengcinga ephezulu. Ndicinga nje ukuba kungakuhle ukuba ahambe ejikeleza indlu aze atsalele umnxeba aze aphelele ehlathini, mhlawumbi kukho amachaphaza athile kuwo. '
Iqhotyoshelweyo ibonisa uAdele usebenzisa i-flip-phone endala, eshiya abalandeli bezibuza ukuba kutheni inkwenkwezi ingenayo i-smartphone. 'Iyandiphambanisa,' utshilo uDolan ngokubhekisele kwincoko kwimidiya yoluntu malunga nesixhobo. Ndizibonile ii-GIFs kwi-Twitter. Ndinje, 'bafana, yidluliseni. Ayinamsebenzi. ' Kodwa eyona nkcazo yeyokuba andikaze ndikuthande ukufota iifowuni zale mihla okanye iimoto. Bamiliselwe kubomi bethu kangangokuba xa ubabona kwiimuvi uyakhunjuzwa ukuba uyinyani.
'Ukuba ubona i-iPhone okanye iToyota kwimovie, zichasene nokubalisa, ziyakukhupha ebalini,' wongeze watsho. 'Ukuba ndibeka i-iPhone okanye imoto yanamhlanje kwimovie ingathi ndenza urhwebo.'
Ividiyo yaphule irekhodi leyure ezingama-24 iVevo ngokufezekisa ukubukwa kwezigidi ezingama-27.7. Isihloko seembono ezininzi ngosuku olunye lwevidiyo ngaphambili ibibanjwe nguTaylor Swift kwikliphu yakhe 'yeGazi elibi'.
UTaylor Swift uphinde wayifumana irekhodi kuAdele xa imbonakalo yakhe ethi 'Jonga into oyenze ukuba ndiyenze,' iphumelele iimbono ezizizigidi ezingama-43.2 kusuku lokuqala emva kokukhululwa ngo-Agasti 2017.
Ingoma yokuvula, 'Molo, ndim' ligama lengoma kaT Todd Rundgren malunga nolunye uhlobo lwencoko ebuhlungu- kuloo Rundgren uphuka nentombazana.
Ukuthetha ngomgca, 'Molo kwelinye icala,' utshilo u-Adele Amatye agiqekayo : 'Kuvakala ngathi ndisoyika, ingathi ndifile, kodwa eneneni isuka kwelinye icala lokuba ngumntu omdala, iyenze iphile ukususela kwiminyaka yakho yokufikisa.'
U-Adele uchaze intsingiselo yengoma ku Umthombo . Ingoma imalunga nokwenzakalisa iimvakalelo zomntu kodwa ikwangokuzama ukuhlala unxibelelana nam, ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukuyenza, utshilo. Imalunga nokulangazelela elinye icala lam. Xa ndingekho, ndiyakukhumbula ngokwenene ubomi bam ekhaya. Indlela endiziva ngayo xa ndingenguye eNgilane, kukuba ... kukuzilahlela. Andikwazi ukuphefumla kwenye indawo. '
'Ndixhomekeke kubomi bam bonke apha,' wongeze watsho u-Adele. Ndiyasebenza ukuba ndiyaphoswa zizinto. Molo ke malunga nokufuna ukuba sekhaya kwaye ndifuna ukufikelela kuye wonke umntu endakha ndamkhathaza- kuquka nam-kwaye ndicela uxolo ngayo. '
Le ngoma inefom efanelekileyo ngokufanelekileyo (ivesi-i-chorus-ivesi-i-chorus-bridge-chorus) kodwa u-Adele utshintshi lwasendle ngokunyaniseka kwezwi kwenza ingoma ibe namandla. I-chorus yokuqala ayibethi kude kube ngu-1: 06, ixesha elide lokulinda kwingoma yepop. Ngokwenza ukuba umphulaphuli ayilinde (into uKaty Perry ngekhe ayenze), xa uAdele evulekile, ikwayara inefuthe elingaphezulu.
Emva kwale khorasi yokuqala, amandla ehla kwindinyana yesibini, kodwa abuye kwi-chorus # 2 kwaye aqhubeke phezulu kuyo yonke ibhulorho, ethi kule ngoma ikhefu lokuthetha apho adlala khona emgceni 'ngokucacileyo ayikudibanisi kwakhona 'Ngokuphindaphinda' u-Oooh ... Nantoni na 'ngaphambi kokubuyela kwikhorasi yokugqibela.
Xa usenza ividiyo, uXavier Dolan ubuze uAdele ukuba alile. Wabenza badlala uLabrinth ongatshatanga 'onomona,' njengoko unefuthe elinjalo kuye. 'Ungayidlala ngomhla wokuzalwa komntwana wam kwaye ndize ndilile iinyembezi,' utshilo u-Adele.
Iincoko ezingavakaliyo phakathi kuka-Adele kunye noMack Wilds zinokuviwa ngexesha lokukhanya. Olu tshintshiselwano ubukhulu becala belulungisiwe. 'Okwethutyana sihleli egumbini sancokola kwaye wabhala nje, utshilo uWilds Ukuzonwabisa ngeveki . 'Izinto ezininzi azirekhodileyo- iincoko zethu, okanye imibuzo ayibuzile, okanye amaxesha ahlukeneyo sihleka okanye siqhula - [yena] uhlobo lokubeka ezo zinto kwikhamera. Kwakumangalisa ukubukela. '
'Sawubona' isuse i-1.1 yezigidi zokukhutshelwa kwiintsuku zayo ezisixhenxe zokuqala e-US, yaba yingoma yokuqala ukuthengisa ngaphezulu kwesigidi sokukhutshelwa kwiveki. Iphule irekhodi elidlulileyo likaFlo Rida '' Ukujikeleza ngokuchanekileyo , 'ekhutshelwe amaxesha angama-636,000 ngo-2009.
Iindidi ezintandathu zezixhobo ezisetyenzisiweyo kule ngoma, ubukhulu becala ipiyano edlala kuyo yonke ingoma. Iidrum, ii-synthesizers, ikatala, imitya, kunye neebhasi nazo ziyavela. Amagubu akwiikorasi ezimbini zokuqala kwaye ivesi yesibini yadlalwa ngee-mallet kwisandi esingxolayo, kwiokhestra; zazidlalwa ngeentonga kwikwayari yesithathu. Kukho nefuthe leentsimbi ze-tubular eziza kungena kule chorus yesithathu.
Abalandeli bachaze ukufana phakathi kuka 'Molo' kunye noTom Waits ka-1973 ingoma kaMartha, ejikeleze incoko yomnxeba phakathi kombalisi kunye nelangatye elidala. Iingoma zayo zibandakanya: 'Molo, molo apho, ngaba nguMarta lo?'
UGreg Kurstin uxelele Ukuzonwabisa ngeveki Ukulinda kuyiphembelele njani ingoma, isithi: 'Akafuni kugqitha nje kwaye abhale ingoma yomculo kunye nayiphi na indlela ethile. Sathetha ngoTom Waits, kunye nababalisi beendaba abohlukeneyo. Ndicinga ukuba ibiyimbono leyo, yokuba sifuna ukwenza into ethembekileyo malunga nokuba wayekuphi ngoku, kwaye wayefuna ukwenza into eyinyani nethembakeleyo.
UAdele noGreg Kurstin bebefanele ukuba basebenze kunye emculweni amashumi amabini ananye , kodwa ayisebenzi. Xa bathi ekugqibeleni bahlela ukubhala iingoma zerekhodi lokulandela lomculi waseNgilandi ngo-2014, umvelisi waseMelika wayengenakukunceda ukuba ube novalo. Kodwa loo nto itshintshile akuba engene estudiyo, kwaye baqala ukusebenza kwiitraki ezinje ngo 'Molo,' 'Amanzi Phantsi kweBridge' kunye 'neMinyaka eyiSigidi eyadlulayo.'
'Umhle kakhulu ukuba ubekunye naye. Uyahlekisa kwaye uhlala ephantsi emhlabeni. ... Unokwazi ukunxibelelana naye ngokukhawuleza kwaye unxibelelane naye, utshilo uKurstin Imithombo yeendaba edibeneyo . Ndiziva ndikhululekile xa ndikunye naye kuba ukwenza uzive unjalo. Upholile nje, emva koko afike kwimakrofoni kwaye ke ayivuthe ingqondo yakho. '
Kwimbonakalo yakhe yokuqala kamabonwakude yaseMelika exhasa 25 , UAdele wajoyina uMateyu McConaughey ngomhla we-21 Novemba 2015 NgoMgqibelo ebusuku Wayenza phi le ngoma kunye 'Ngethuba sasisebancinci.' Ingoma ikwabonakalisiwe kwisiketshi apho ingoma yahlanganisa usapho kunye ngexesha lengxoxo yokuBonga.
Igama 'Molo' livela amatyeli alithoba kuphela kwingoma, kodwa lifumana isikhundla esiphambili njengegama lokuqala kwiivesi:
Oku kuyomeleza isihloko, kushiya ngokungathandabuzekiyo into ebizwa ngokuba yiyo. Uninzi lweengoma ezibethwayo azithethi ngesihloko kwiivesi, kodwa ziphinde izihlandlo ezimbalwa kwiikhorasi.
UAdele uxelele INew York Times 'UJon Pareles ukuba umgca osuka kule ngoma,' Kuqhelekile ukuba ndithethe ngam, ndiyaxolisa 'yingoma yakhe ayithandayo ebhaliweyo.
Kwakukho umsantsa weenyanga ezi-6 phakathi kokubhalwa kweevesi kunye nekwayara ethi 'Molo.'
'Sinesiqingatha sengoma ebhaliweyo,' watsho uGreg Kurstin Amatye agiqekayo . 'Kufuneka ndinyamezele kakhulu.'
Inkqubo ye- 25 I-albhamu ithatha indawo eninzi kwi Incwadi yeGuinness yeeRekhodi . Yathengisa iikopi ezizigidi ezingama-3.38 kwiintsuku zayo ezisixhenxe zokuqala zokukhutshwa, iseta irekhodi leyona veki inkulu yokuthengisa ukusukela oko uNielsen waqala ukulandela umkhondo wentengiso ngo-1991. usale kakuhle kumnini werekhodi odlulileyo NSYNC, kabani Akukho Mitya encanyathiselwe Umdlali omde wathengisa iiyunithi ezingama-2,416,000 ngeentsuku ezintathu zokuqala ezinesiqingatha ezivenkileni ngo-Matshi 2000 (yakhutshwa ngolwe-Lwesine kwaye yabalwa kuphela iintsuku ezintathu zentengiso ngeveki yayo yokuqala).
25 uthengise iikopi ezizigidi kwiiveki ezimbini ezahlukeneyo e-US, icwecwe lokuqala lokuphumeza umdlalo onjalo.
E-UK 25 ithengise iikopi ezingama-800,307 kwiveki yokuqala, irekhodi leNkampani esemthethweni. I-albhamu iphumelele irekhodi langaphambili elibambe i-Oasis '1997 Yiba lapha ngoku , eyathengisa iikopi ezingama-696,000 kwiintsuku zayo zokuqala ezisixhenxe zokukhutshwa.
Ngomhla wayo weshumi 25 uthengise iikopi ezingaphezulu kwesigidi e-UK esaphula iRekhodi yeNgxelo yeAlbum yase-UK ngokusesikweni kweyona albhamu ikhawuleza ithengiswe.
Umlobi uRick Ross wenze njalo remix ethandwayo yale ngoma njengenxalenye yechungechunge lwe-2015 Renzel Remixes. URoss ngumlandeli omkhulu wemvumi. 'Ndiyamthanda uAdele,' uxelele Amatye agiqekayo . 'Xa ndimbona, ndingamanga uAdele. Uthethelela abantu abaninzi. '
Ayipheleli ekuculeni ingoma emnandi u-Adele, kodwa ukwadlala namagubu kwingoma.
Oku kuphumelele iBest yaseBritane engatshatanga kwii-BRIT Awards zika-2016. U-Adele uphinde wagoduka ne-gongs ye-Best Album, iBest yaseBritane yabasetyhini kunye neMpumelelo yeHlabathi.
UAdele uvule iiMbasa zeGrammy ngo-2017 ngentsebenzo yale ngoma, ephawula ukubuya okuphumeleleyo emva komdlalo omdaka ' Yonke into endiyicelayo kunyaka ophelileyo. Ubusuku bakhe babungekapheli nangona kunjalo. Emva kwexesha, wacula ingoma kaGeorge Michael ethi 'Fastlove' ngembeko kwimvumi, eyasweleka ngomhla weKrisimesi, ngo-2016. Ndaziqinisa, utshilo, ngaphambi kokucela ukuqala kwakhona. Iokhestra yayithatha phezulu kunye nevidiyo kaMichael eyidlalayo yangasemva yaphinde yahlaselwa; Ngeli xesha ufumene ukusebenza ngokweemvakalelo ngobuchule, efumana ukuvuswa ngokuqaqanjelwa kunye nokwaziwa ngokubanzi ngombulelo ofanelekileyo kuMichael.
Ewe ewe, kamva kusasazo, 'Molo' uphumelele iNgoma yoNyaka, iRekhodi yoNyaka kunye neNtsebenzo yePolo Solo, kunye 25 ithathe iAlbhamu yoNyaka kunye nePopu yeVocal yePop yaseVol. Ukwamkela Ingoma yoNyaka, u-Adele ubulele umbhali-mbhali wakhe uGreg Kurstin 'ngomonde wakho nam, nokunceda ekwenzeni ingoma yam endiyithandayo.'
Iingoma zeSanta Ndixelele nguAriana Grande
Iingoma zikaMaria Maria nguSantana
UDragula nguRob Zombie
I-Monster ngu-Kanye West (kunye noNicki Minaj noJay-Z kunye noRick Ross)
Lyrics for Ndibuyile by Mfaz 'Omnyama
SexyBack nguJustin Timberlake
Iingoma zokuVuyiswa nguRapper nguSugarhill Gang
Umpu obanjiweyo weBolt ngeCarcass
Iingoma ze Sweet Home Alabama nguLynyrd Skynyrd
Sukundiyeka ndicofe isihlanu
Amaphiko aphukileyo nguMnu
Iingoma zeTotshi nguJessie J
Amantombazana afana nawe ngeMaroon 5 (equka uCardi B)
Indlela yobomi yenombolo 1
111 lithetha ilangatye lamawele
firefall ungumfazi lyrics
demi lovato andikhathali
oh umntanam angaba phi amazwi